Utu na-eto eto | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Utu na-eto eto
Otu esi echekwa raspberries, gbasaa usoro ndu
Otu n'ime ihe ndị kachasị amasị nke ubi ahụ bụ utu. Ala na-adighi na-enweghi ohia akwukwo ohia ma obu karia. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú e si eto ma na-elekọta mkpụrụ osisi raspberries. Kedu otu esi enweta mmiri raspberries, ma ma ọ dị mkpa ka a mee otu n'ime ihe nzuzo ndị na-eto eto nke ụdị ụdị a bụ usoro ziri ezi nke mmiri mmiri.
Akpa Hercules: nkọwa dịgasị iche iche, ịkụ ihe na ịkọ ihe
Akuku Hercules - ọrụ nke horticultural art. Nrọ nke ubi ahụ mezuru - nnukwu tomato na-acha ọbara ọbara, na-amị mkpụrụ n'afọ nke ịkụ mkpụrụ, ihe ubi dị oke mma, ọbụna frosts, na ihe a nile na-enweghị ụdị aghụghọ na nchegbu ọ bụla. Ị ma? Ihe dị iche iche nke remontant (site na Fr. Remontant - na-ebili, na-agbanye okooko) raspberries - ịmị mkpụrụ ugboro abụọ n'afọ.
Atụmatụ kacha elu maka na-eto eto raspberries Hussar: nkọwa dịgasị iche iche, kụrụ ma lekọta
Hussar bụ ụdị dị iche iche na mkpụrụ osisi na-enweghị atụ na-emetụta ọtụtụ ndị na-elekọta ubi. Ọbụna na ntakịrị nlekọta bushes wetara elu zaa. Utu Hussar tomato bụ nnukwu, na-egbuke egbuke, utoojoo-ụtọ na incredibly aromatic. Ka anyị gaa n'ihu nkọwa nke cultivar nke Gusar akwukwo nri, nakwa ịmara banyere njirimara nke ịkụ ihe na ilekọta ihe ọkụkụ a.
Akụkụ nke ịkọ mkpụrụ osisi "Caramel": ụdị dị iche iche, ịkụ na nlekọta
Varietal novelties na-adọrọ mmasị mgbe niile. Ụtọ, nnukwu tomato, bushes, na-amị mkpụrụ n'oge oge dum abụghị uru niile dị iche iche. Otu n'ime ngwaahịa ndị a bụ utu "Caramel". Ọ pụtaghị n'oge dị anya gara aga, na afọ 2013, ndị nwe ụdị nke a jupụtara na owuwe ihe ubi mbụ.
Ọtụtụ ndị na-ahụkarị na-ahụ naanị pink ma ọ bụ red raspberries, na na obere akụkụ nke ndị ọrụ ugbo maara banyere adị adị nke raspberries na-acha odo odo na odo. Nke a bụ nnukwu oge izute ya na ubi anyị. Isiokwu a na-elekwasị anya na ụdị mkpụrụ osisi dị iche iche Yellow Giant. N'ihi ntakịrị ihe eji ejiji anthocyanin, ọ na-adaba maka ojiji nke ụmụntakịrị, ndị na-arịa ọrịa allergies na ndị ime ime.
Nkọwa nke isi mkpụrụ utu ọka
Ndị nọ n'oge okpomọkụ na-akwanarị Raspberries ùgwù. N'ogige ahụ, ị ​​ga-enwe ike izute obere mkpụrụ utu ọka. Osisi a na-eweta ihe dị ukwuu, na-enye aka na oyi, na ụdị dị iche iche nke mkpụrụ osisi dị iche iche na-atọ ụtọ uto na agba nke tomato. A na-akpọ mkpụrụ osisi blackberry ụdị blackberry. Ọ bụ ndị ezinụlọ Rosaceae wee si anyị North America.
Ihe ị chọrọ ịma gbasara ịkụ na ịche osisi Tarusa
Nri akwukwo akwukwo akwukwo aghugh onye obula. Karịsịa mgbe o yiri osisi. N'ogige ọ bụla i nwere ike ịhụ ụdị tomato dịgasị iche iche. Kasị ewu ewu na osisi ugbu a na-atụle mkpụrụ osisi Tarusa. N'isiokwu a, ị ga-amụta otú ị ga-esi na-akụ ma na-elekọta nke a dịgasị iche iche nke raspberries.
Raspberry "Cumberland": àgwà nke ọtụtụ na cultivation agrotechnology
N'ihe na-eme ka ihe dị iche iche na-acha uhie uhie na-acha na-acha, ọ na-egosi na ọ bụghị ihe dị iche iche, ebe ọ bụ na ọ na-egbuke egbuke na mpaghara. Kedu ihe m nwere ike ikwu, ọbụna na ire ya abụghị mgbe niile ịchọta seedlings nke mkpụrụ osisi blackberry "Cumberland", nke kpatara ya ka mmadụ ole na ole na-eche maka ịgha mkpụrụ na nlekọta ya.
Olee otú na-eto eto nnukwu mkpụrụ utu "Atlant"
Ntucha mkpụrụ osisi dị iche iche na-ewu ewu n'etiti ndị na-elekọta ubi taa. Nri "Atlanta" kwesịrị ka a mara ya pụrụ iche n'ihi na ọ na-eguzogide ọrịa ndị dị elu, na n'isiokwu a, ị ga-ahụ nkọwa nke ụdị dị iche iche, foto na usoro nlekọta. Ihe omuma nke di iche iche Ka anyi leba anya na akwukwo nri di iche iche, maka nmalite ayi gelebara ihe omuma ya anya.
Olee otú akụ raspberries na ọdịda
Osisi swiberi mara ezigbo mma nye ubi ubi, obughi nani n'ihi na ha puru igha nkpuru, kamakwa ha na oru ha. N'okpuru mgbidi ma ọ bụ akụkụ dị iche iche nke raspberries na mkpụrụ osisi ndị mara mma ga-eme ka ihe mara mma nke ọma dị ka ihe ndị dị na bred.
Esi eweputa raspberries
Ndị kweere na na ok utu thickets nke tomato chara n'onwe karịa na cropped otu bushes, ha bụ nnọọ na-ezighị ezi. Ọ bụrụ na anyị tụnyere ohia ma gbanye ya, ọ ga-ahụ ngwa ngwa na mkpụrụ osisi ahụ dị njọ karịa nnukwu osisi, na àgwà ndị dị mma dị mma karịa mkpụrụ osisi ndị ahụ na-eto eto.
Anyị na-eto nri iche "Kirzhach"
Raspberries iche Kirzhach ka ogologo oge toro na atụmatụ dacha nke ọtụtụ ndị mmadụ. Ọ dị iche n'àgwà ụfọdụ nke Chineke, mana maka mkpụrụ ndụ ya, ọ kachasị nlezianya anya. Ya mere, ụdị mkpụrụ osisi a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na mba anyị.
Raspberry Canada: nkọwa na ịkọ nke dịgasị iche iche
Taa, enwere ọtụtụ ụdị mkpụrụ osisi, n'etiti ndị ọkọlọtọ ndị a ma ama. N'oge na-adịbeghị anya, ụdị mkpụrụ osisi ndị dị na Canada, nke bụ onye nnọchianya a ma ama n'etiti ndị kachasị mma nke otu a, na-ahụkarị na atụmatụ ndị dacha. N'isiokwu anyị, anyị ga-akọwa ụdị ụdị a ma kọwaa otu esi elekọta ya.
Ghaaranụ raspberries Mpako nke Russia na ubi ya
Anyị niile na-eri nri na-atọ ụtọ, vitamin-bara ọgaranya tomato n'oge okpomọkụ. Otu n'ime ihe ndị kachasị amasịkarị na nke kachasị mmasị n'etiti ndị okpomọkụ bụ ndị mpako nke Russia. N'isiokwu anyị, anyị ga-agwa gị ihe a dịgasị iche iche na otu esi elekọta osisi. Nkọwa Ntucha A na-ahụkarị nganga nke Russia na nkata ndị ahụ, nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche maara nke ọma maka ndị na-elekọta ubi.
Otú e si akụ raspberries na mmiri
Raspberries - tọrọ ụtọ, keisi na incredibly ike tomato. Banyere ya edere abụ na abụ. N'otu oge ahụ, osisi ahụ dị oke mma, na ọbụna novice nwere ike ịmị mkpụrụ shrub. A na-ewere mmiri na-akụ mkpụrụ osisi raspberries ka ọ dị irè ma na-arụpụta - ka anyị lee ihe mere. Okwu mmiri Ka anyị chọpụta mgbe ị ga-akụ mkpụrụ osisi na mmiri.
Ihe ndị bụ isi nke nlekọta kwesịrị ekwesị maka raspberries na mmiri
Na-atọ ụtọ ma na-esi ísì ụtọ, dị mma na ahụike, ọgwụgwọ na ụdị beri kachasị mma - utu. O siri ike iche na ọ dịghị beri a na dacha, n'ihi na ọ chọghị ka nlebara anya, na-elekọta mkpụrụ osisi raspberries n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ ga-amasị ya na oke owuwe ihe ubi. Ịkụ mkpụrụ na ịghagharị osisi. Osisi ọ bụla hụrụ otu akụkụ nke "ala" nke ala, ọtụtụ ìhè na ndị agbata obi ya.
Iwu maka nlekọta mmiri na ịzụ nri raspberries na mmiri
Na-eri raspberries na mmiri ma ọ bụ - nke ahụ bụ ajụjụ ahụ. Ka anyị hụ ihe kpọmkwem mmiri elekọta raspberries bụ, na ihe kpọmkwem dị mkpa ka ifatilaiza raspberries na mmiri iji mee ka mkpụrụ. Kedu oge nlekọta mmiri? Kalenda abịawo n'oge opupu ihe ubi, nke pụtara na ọ bụ oge iji malite ịrụ ọrụ na raspberries.
Atụmatụ nke na-eto eto strawberry utu
Ịchọrọ osisi na-esi ísì ụtọ na mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ ma na-eme ka ọ dịrị ka blackberry na ibé gị? Nke a beri mix a na-akpọ ụyọkọ Tibetan. Taa, ndị bi n'ógbè Baltic na Poland na-ama nke ọma, ebe ọ bụ na Ukraine, ụdị ahụ bụ ihe a na-amaghị ama. Ka anyị mara ya n'oge na-adịghị anya!
Ụdị dị iche iche mkpụrụ osisi Raspberry: àgwà, ịkọ agrotechnics
Raspberries bụ ezigbo berry n'etiti ndị na-elekọta ubi na ọtụtụ ndị mmadụ n'anya. Ọ bara ezigbo uru. Ya mere, nhọrọ nke ụdị osisi dị iche iche nke na-eto eto na-eto eto na nkwekọrịta nke aka ya bụ mmesi obi ike nke nnukwu mkpụrụ osisi buru ibu ma dị ezigbo ụtọ n'ọdịnihu. Ọ bụ ụdị mkpụrụ osisi a bụ "Ispolin", nke a na-ewu ewu na n'akụkụ nile nke mba ahụ na mba ndị ọzọ.
Ntu "Barnaul": àgwà, uru na ọghọm
Mgbe niile, utu bara uru maka uru bara uru, ihe na-esi ísì ụtọ na ihe uto pụrụ iche. Ka ịhọrọ ụdị dịgasị iche iche nke ga-adabara na uto, na mkpụrụ nke mkpụrụ na nnabata na ụfọdụ ọnọdụ ihu igwe - ọrụ ahụ anaghị adị mfe. Ee, na otu ụdị dịgasị iche iche bụ mgbe ụfọdụ àgwà na-enweghị isi.